Caalamka Online » Qaramada Midoobay oo Imaaraatka Ku eedeeysay in ay qal qal xoogan galisay Siyaasada Dowlada Somalia
Qaramada Midoobay oo Imaaraatka Ku eedeeysay in ay qal qal xoogan galisay Siyaasada Dowlada Somalia
November 13, 2017 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Guddiga Qaramada Midoobay u qaabilsan dabagalka xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowlada Imaaraatka Carabta ay qal qal xoogan galisay siyaasada Dowlada Soomaaliya.
Guddigaan ayaa ku sheegay warbixinta ay soo saareen in Dowlada Imaaraatka Carabta ay gil gishay siyaasada Soomaaliya sanadkan, waxa ayna Guddiga tilmaameen in Imaaraatka lacago laaluush ah siiyeen Madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira.
sidoo kale waxaa lagu sheegay in UAE ay ku qanciyeen Madaxda maamul goboleedyada dalka in ay ka hor yimaadeen go’aankii dhax dhaxaadka ahaa ee dowlada Federaalka ka qaatay xiisada Wadamada Khaliijka.
Guddiga ayaa warbixintooda ku xusay in Imaaraatka ay madaxda maamul goboleedyada ay kulan u qabatay kadibna ay lacag ku siisay sidii wakiiladooda baarlamaanka Soomaaliya ku jira u carqaladayn lahaayeen go’aanka dhex dhexaadnimada ah ee dawlada ka qaadatay arrinta khilaafka Khaliijka.
waa warbixintii ugu horeeysay ee gudigaan ka soo saaro faragalinta iyo qalqalka siyaasadeed ee imaaaraatka tan iyo markii xiisada khaliijka ay sida ba’an U saamaynta Dowlada Cusub, waxaa gabgabadii lagu sheegay in Dowlada Imaaraatka dadaal badan ku bixisay sidii dowlada Soomaaliya ay uga laaban laheyd go’aanka dhax dhaxaadka ay ka qaadatay xiisada Wadamada Khaliijka.
DEG DEG: Dagaalkii ugu cuslaa ee Somaliland oo laga wada arinsanayo & Gaas oo Saraakiisha Puntland Oo Hurinaya dagaalka TukaraqJanuary 23, 2018
Qabiil Caan ah Oo Caado kaa dhigtay in ay Raga Isku Galmoodaan Oo Ragii ka dhamaadayJanuary 23, 2018
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shir gaar ah uga qeyb galay dalka SacuudigaJanuary 23, 2018
DAAWO: M/weyne kuxigeenka Somaliland & Saraakiisha Militariga Somaliland maxay ku wada hadleen, Maxayse isla garteen? Booqasshada TukaraqJanuary 22, 2018
Ciidamada Kenya oo burburiyay xarun Isgaarsiin oo Shirkadda Hormuud ku laheyd Gobolka GedoJanuary 22, 2018
Faah Faahin Dagaal Khasaaro Dhimasho iyo dhaawac Geystay Oo Ka Dhacay magaaladda MuqdishoJanuary 22, 2018
Farmaajo Oo Tagaya Maanta Magaalo xeebeedka HobyoJanuary 22, 2018
Akhriso Qormo aad Ukooban Oo ad la ilmayn doonta, Faisa sh. Maxamed ka soo qortay TurkigaJanuary 22, 2018
Mr. Boon Oo Soomaaliya ka yaqaan in ay tahay dal qurux badan caasimadeeduna tahay MuqdishoJanuary 22, 2018
WAR DEG DEG AH: Dagaalo lagu hoobtay oo ka dhacay deegaano ka tirsan Somaliland & Dhimashadii ugu badnayd + Dhaawacyo culus “20 Qof ayaa Dhintay Dhaawacuna Kasii Badan”January 22, 2018